Happy New Year မှာ ပျော်ပါးသောက်စားမဲ့သူများအတွက် နှစ်သစ် အတွက် ကံကြမ္မာ အပြောင်းအ လည်းဖြစ်စေ မဲ့ ယတြာ အမြည်းလေး လုပ် ပုံအဆင့်ဆင့်ပါ…. – Shwewiki.com
Happy New Year မှာ ပျော်ပါးသောက်စားမဲ့သူများအတွက် နှစ်သစ် အတွက် ကံကြမ္မာ အပြောင်းအ လည်းဖြစ်စေ မဲ့ ယတြာ အမြည်းလေး လုပ် ပုံအဆင့်ဆင့်ပါ….
December 28, 2019 By admin Knowledge
Happy New Year မှာ ပျော် ပါးသောက်စားမဲ့သူများအတွက် နှစ်သစ်အတွက် ကံကြမ္မာ အပြောင်းအလည်းဖြစ်စေမဲ့ ယတြာ အမြည်းလေး လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ပါ ရေးပေးလိုက်တယ်နော်
ထိုင်းစတိုင် ငါးဆားအုံမီးကင် နှစ်သက်ရာငါးတစ်ကောင်ကိုကြေးခွံ မခွာဘဲ ဗိုက်ခွဲပြီး အထဲကအရာများအားလုံးထုတ် ပါးဟတ်ဖယ်ကာ ရေဆေးထားပါ။ ထုထားသောစပါးလင်နဲ့ရှောက်ရွက်အနည်းငယ်ကို ငါးကင်လျှင် အနံ့မွှေးစေဖို့အတွက် ခွဲထားသောဗိုက်ထဲသို့အစာသွပ်ပေးပါ။ ဆားကြမ်းနဲ့ဂျုံမှုန့်အနည်းငယ် ရေအနည်းငယ် တို့ကိုစေးလာသည်အထိနယ်ပြီး ငါးရဲ့နေရာအနဲ့ကို သုတ်လိမ်းပေးပါ။ ပြီးရင် ၁၅မိနစ်ခန့် လေသလပ်ခံပေးပါ။ပြီးမှ ငါးကိုကင်ပါ။ တူးမသွားစေရန် ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပြီး မိနစ်၃၀ခန့်ကင်ပေးရပါမယ်။
အချိန်ပြည့်လို့ကျက်ပြီဆို ငါးရဲ့အပေါ်လွှာကို ဖယ်ပြီးအတွင်းမှ အသားဖြူဖြူလေးကိုစားလို့ရပါပြီ။ အတော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ ငါးဆားအုံလေးပါရှင့် အချဉ်ရည်ဖျာ်နည်းက ငံပြာရည် သံပုရာရည် ကြက်သားမှုန့် သကြား ငရုတ်သီးစိမ်း သို့ ငရုတ်သီးမှုန့်ထည့်မွှေကာ တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ *ဆားတွေမကပ်မှာစိုးလို့ ဂျုံမှုန့်အနည်းငယ်ထည့်သုံးထားပါတယ် ထိုင်းဆိုင်တွေမှာက ဂျုံမှုန့်မသုံးပါဖူးရှင့်
Happy New Year မှာ ပြျောပါးသောကျစားမဲ့သူမြားအတှကျ နှဈသဈအတှကျ ကံကွမ်မာ အပွောငျးအလညျးဖွဈစမေဲ့ ယတွာ အမွညျးလေး လုပျပုံအဆငျ့ဆငျ့ပါ ရေးပေးလိုကျတယျနျော
ထိုငျးစတိုငျ ငါးဆားအုံမီးကငျ နှဈသကျရာငါးတဈကောငျကိုကွေးခှံ မခှာဘဲ ဗိုကျခှဲပွီး အထဲကအရာမြားအားလုံးထုတျ ပါးဟတျဖယျကာ ရဆေေးထားပါ။ ထုထားသောစပါးလငျနဲ့ရှောကျရှကျအနညျးငယျကို ငါးကငျလြှငျ အနံ့မှေးစဖေို့အတှကျ ခှဲထားသောဗိုကျထဲသို့အစာသှပျပေးပါ။ ဆားကွမျးနဲ့ဂြုံမှုနျ့အနညျးငယျ ရအေနညျးငယျ တို့ကိုစေးလာသညျအထိနယျပွီး ငါးရဲ့နရောအနဲ့ကို သုတျလိမျးပေးပါ။ ပွီးရငျ ၁၅မိနဈခနျ့ လသေလပျခံပေးပါ။ပွီးမှ ငါးကိုကငျပါ။ တူးမသှားစရေနျ ဟိုဘကျဒီဘကျလှနျပွီး မိနဈ၃၀ခနျ့ကငျပေးရပါမယျ။
အခြိနျပွညျ့လို့ကကျြပွီဆို ငါးရဲ့အပျေါလှာကို ဖယျပွီးအတှငျးမှ အသားဖွူဖွူလေးကိုစားလို့ရပါပွီ။ အတျောလေးကောငျးမှနျတဲ့ ငါးဆားအုံလေးပါရှငျ့ အခဉျြရညျဖျြာနညျးက ငံပွာရညျ သံပုရာရညျ ကွကျသားမှုနျ့ သကွား ငရုတျသီးစိမျး သို့ ငရုတျသီးမှုနျ့ထညျ့မှကော တှဲဖကျစားသုံးနိုငျပါတယျ။ *ဆားတှမေကပျမှာစိုးလို့ ဂြုံမှုနျ့အနညျးငယျထညျ့သုံးထားပါတယျ ထိုငျးဆိုငျတှမှောက ဂြုံမှုနျ့မသုံးပါဖူးရှငျ့
Voting အများ ဆုံးဖြင့် ထိပ်ဆုံး မှ အပြတ်အသတ်ဦးဆောင်နေ သူ